Analytics amin'ny atiny: Fitantanana eCommerce farany-ho-farany ho an'ny marika sy mpivarotra antsinjarany | Martech Zone
Analytics amin'ny atiny: Fitantanana eCommerce farany-ho-farany ho an'ny marika sy mpivarotra antsinjarany
Sabotsy 18 Novambra 2017 Alakamisy, May 7, 2020 Douglas Karr
Ireo mpivarotra amoron-tserasera maro dia maro no mahatsapa ny maha-zava-dehibe ny atiny vokatra marina, saingy miaraka amina pejy an-jatony an'arivony ampidirina ao amin'ny tranonkalany isan'andro amin'ny mpivarotra samihafa an-jatony, saika tsy azo atao ny manara-maso izany rehetra izany. Etsy andaniny, ny marika matetika dia mampihetsi-po laharam-pahamehana amin'ny laharam-pahamehana, ka manahirana azy ireo ny miantoka hatrany ny lisitra tsirairay avy.
Ny olana dia ny mpivarotra sy ny marika matetika no manandrana mamaha ny olan'ny votoatin'ny vokatra ratsy amin'ny alàlan'ny fametrahana vahaolana tokana. Mety manana teknolojia fandinihana izy ireo izay manome fahitana momba ny olana amin'ny lisitry ny vokatra, saingy tsy manome fitaovana hamahana ireo olan'ny atiny arak'izany. Etsy ankilany, ny mpivarotra sy ny marika sasany dia mety manana syndicator atiny izay manana fitaovana hitantanana sy hanovana ireo olana momba ny atin'ny vokatra, saingy tsy mampiseho manokana izay fampahalalana mila havaozina sy ny fomba fanavaozana azy.
Ireo mpivarotra enta-madinika sy ny marika iarahan'izy ireo miasa dia samy mila analytics sy fitantanana atiny vokatra mba hanomezana ny mpanjifa ny vaovao takian'izy ireo amin'ny fikarohana sy fividianana vokatra an-tserasera. Content Analytics no vahaolana voalohany sy tokana farany eCommerce manambatra ny analytics, ny fitantanana ny atiny ary ny fanaovana tatitra amin'ny sehatra iray, manome lanja ireo mpivarotra sy ireo mpivarotra ao aminy.
Analytics amin'ny atiny ho an'ny mpivarotra: VendorSCOR ™
VendorSCOR ™ dia fitaovana iray manome alalana ny mpivarotra hitandrina ny mpivarotra ho tompon'andraikitra amin'ny atiny vokatra apetrany ao amin'ny tranonkalany. Ny vahaolana tokana sy tokana amin'ny karazany, VendorSCOR dia mamela ny mpivarotra haneho amin'ny mpivarotra izay faritra mila fifantohana sy fanovana eo no ho eo, fanatsarana ny kalitaon'ny tranonkala ary fampiroboroboana ny fifandraisana amin'ny tontolon'ny marika rehetra. Ho an'ny marika manokana, VendorSCOR dia manampy azy ireo hiantohana ny pejin'izy ireo mifanaraka amin'ny fitakian'ny mpivarotra sy ny mpanjifa, mampitombo ny tsy fivadihan'ny mpanjifa sy ny tahan'ny fiovam-po.
Miaraka amin'ny VendorSCOR, ny mpivarotra dia afaka mandefa scorecards mpivarotra amin'ny kalitaon'ny vokatra tsirairay isan-kerinandro, manampy azy ireo hiantohana ny atiny hatrany hanaraka ny fenitry ny mpivarotra ary hamarinina indrindra ho an'ny mpanjifa. Amin'ny alàlan'ny fitrandrahana angon-drakitra an-tranonkala dia mandady ilay tranokala ilay fitaovana mba hamantarana ireo lesoka, lesoka ary fanesorana ny atiny, toy ny sary tsy hita, ny famaritana ny vokatra tsy mahomby, ny tsy fisian'ny naoty ary ny fijerena ary ireo olana hafa misy fiatraikany amin'ny fifamoivoizana sy ny fanovana. Manampy ireo mpivarotra amin'ny laharam-pahamehana amin'izay ny zavatra tokony hamboarina ary manome fahitana sy dingana azo ampiharina amin'ny fanatsarana ny atiny.
Raha vantany vao takatry ny mpivarotra ny olana amin'ny atiny sy ny fotoana mety hivoarany, VendorSCOR dia manampy ny marika hanao fanavaozana mifanaraka amin'izany. Fitaovana PIM / DAM matanjaka ao amin'ny Content Analytics dia mamela ny marika hitahiry sy hanitsy ny atin'ny vokatra, fa hahita ihany koa ny fomba ahafahan'izy ireo manatsara tsara ny vokatra tsirairay ho an'ny karoka. Avy any, ny marika dia afaka mametaka haingana ny atiny vokariny amin'ireo fantsom-pivarotany rehetra amin'ny endrika sahaza azy, hiantohana ny tsy fitoviana sy ny fahamarinan'ny sehatra rehetra.
Amin'ny alàlan'ny fanolorana ireo mpivarotra amin'ny fitaovana ilain'izy ireo hiantohana ny tranonkalany manana atiny vokatra miavaka, ny VendorSCOR dia mamela ny mpivarotra sy ny mpivarotra hiara-miasa amin'ny farany hitarika ny varotra sy hanome traikefa ho an'ny mpanjifa tsara kokoa.
Target, iray amin'ireo mpivarotra enta-madinika voalohany niara-niasa tamin'ny Content Analytics tamin'ny scorecards VendorSCOR, dia hifantoka amin'ny fampiasana ilay fitaovana hanatsarana izany mialoha ny fetin'ny fialantsasatra 2017. Ireo mpivarotra ambongadiny, toa an'i Target, dia mitodika any amin'ny VendorSCOR hanampy amin'ny fampivoarana ny traikefa fiantsenana ho an'ireo mpandray anjara anatiny, ny marika ary indrindra ny mpiantsena azy ireo.
Ny fampifangaroana ny famakafakana sy ny fitantanana atiny no lakilen'ny fahavelomana sy ny fandresena eo amin'ny tontolon'ny varotra lafo vidy ankehitriny. Raha tsy manome ny mpanjifa ny fampahalalana ilainy hividianana mpivarotra ny mpivarotra dia handeha ho any amin'izay iray izy ireo. VendorSCOR dia tsy manara-maso fotsiny ny olana iray fa manome ihany koa ireo mpivarotra sy ny marika iarahan'izy ireo miaraka amin'ny vahaolana voarindra sy mifanaraka amin'ny mpampiasa hanamboarana azy miaraka. Kenji Gjovig, VP amin'ny fiaraha-miasa sy ny fampandrosoana ny orinasa ao amin'ny Content Analytics
Analytics amin'ny atiny ho an'ny marika: Fitaovana fanaovana tatitra voalohany ho an'ny marika
Fantatry ny marika tsara fa ny mpivarotra dia manitsy ny vidiny miaraka amin'ny fampandrenesana kely, fa raha tsy misy ny faharanitan-tsoratry ny rindrambaiko hifanaraka amin'ny hafainganan'ny algorithms an'ny mpivarotra dia tsy azon'izy ireo fantarina hoe iza ny mpivarotra an-tserasera no namindra ny vidiny aloha sy ny habetsaky ny fivoarany.
Ny Tatitra Mover Voalohany an'ny Analytics dia manara-maso ny vidin'ny vokatra mitovy amin'ny tranokala mpivarotra marobe amin'ny fotoana tena izy, mamantatra sy mitatitra ny isan'ny fanovan'ny mpivarotra ny vidiny ary iza no nifindra voalohany. Ho fanampin-javatra tsy misy tohiny amin'ny tatitra momba ny fanitsakitsahana ny vidin'ny MAP sy MSRP efa misy, ny First Mover Report dia manampy ny marika hamantatra sy hanaraka ny fotoana azo hatsaraina ary hanome antoka ny vidiny marina amin'ny fantsona rehetra amin'ny Internet.
Fandinihana tranga: Mattel
Talohan'ny niarahany niasa tamin'ny Content Analytics dia efa nanana fifantohana stratejika momba ny fitantanana omnichannel i Mattel, saingy tsy nanana fitaovana hanarahana ny fangatahan'ny mpanjifa mitaky fitomboana amin'ny traikefa an-tserasera.
Mba hanatsarana ny varotra sy hitehirizana ny fananana marika amin'ny Internet dia nitodika tany amin'ny Content Analytics i Mattel mba hamolavola paikady omnichannel telo loha ho an'ny orinasan'izy ireo eCommerce, izay misy:
Fanatsarana ny atin'ny vokatra amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny lohateny sy ny famaritana ny vokatra, ary koa ny fampidirana teny fanalahidy, sary ary horonan-tsary voatsara amin'ny karoka
Mampihena ny tahan'ny tahiry ivelan'ny tahiry amin'ny alàlan'ny fananana fahitana amin'ny fotoana tena izy rehefa lany ny stock ny vokatra
Manararaotra amin'ny fantsom-pivarotana an'ny antoko fahatelo amin'ny alàlan'ny fampiharana ny paikadim-pitaterana sy ny analytics mba hanampiana amin'ny fahafantarana ny fomba hampitomboana ny fahafaha-mividy boaty
Amin'ny alàlan'ireo firesahana ireo teboka fanaintainana telo ireo, ny Content Analytics dia afaka nanatsara ny zavatra niainan'i Mattel sy ny fehiny. Ny metrika manokana dia misy:
Manatsara ny atin'ny SKU 545 ambony aminy, hatramin'ny fotoana nahazoan'izy ireo Score momba ny fahasalamana atiny Content Analytics 100% amin'ny entana rehetra
Nihena ny tahan'ny tahiry ivelan'ny tahiry 62% teo anelanelan'ny nov-des 2016
Fanatsarana ny tahan'ny tahiry ho an'ny mpamily fototra hatramin'ny 21%
Namorona ny "Mattel Shop", fantsom-pivarotana antoko fahatelo hiantohana ny boaty mividy rehefa tsy manana stock intsony i Mattel, ka mitahiry ny hitsiny sy ny fanaraha-maso ny mpanjifa.
Rehefa miatrika SKU an'arivony ianao amin'ny fantsona marobe, ny fananana fitaovana sy angon-drakitra mifanaraka tsara amin'ny toerana iray dia manampy antsika hamaritra tsara ny toerana hanafainganana ny fanovana. - Erika Zubriski, filoha lefitra Sales, Mattel
Vakio ny fandinihana tranga feno
Marika sy mpivarotra hafa mampiasa Analytics amin'ny atiny ampidiro Walmart, P&G, Samsung, Levi's, L'Oreal ary maro hafa.
Tags: fahasalamana atinyContent Marketingtohodranon'iatiny ecommerceKenji GjovigL'OrealLevi nymattelP & Gpimpejy vokatraatiny fivarotanaSamsungSKUlasibatraisa mpivarotrampivarotraWalmart
Zahao ity mailaka GIF Animated ingenious avy any Netflix ity
Clicktale: Fanaraha-maso ny hetsika Analytics amin'ny tontolo tsy misy kaody
27 Novambra 2017 à 11:49
Ao amin'ny tontolon'ny marketing dizitaly dia misy karazana fitaovana teknolojia ara-barotra izay manampy antsika handroso. Ny fitaovana teknolojia marketing dia manamora ny zavatra. Ho an'ny atiny dia nahazo fitaovana Buzzsumo, fitsipi-pitenenana sns izahay. Ho an'ny Design dia manana fitaovana Lumen 5, stencil sns. Ho an'ny HTML dia manana litmus izahay, borosy ranomainty. Ho an'ny marketing mailaka dia manana Mailchimp izahay. Ho an'ny Seo dia manana Href, rankwatch, Keyword Planner sns izahay. Ho an'ny analytics dia manana Google analytics izahay. Ho an'ny haino aman-jery sosialy dia manana Socio advocacy izahay, bitly, Ho an'ny fitantanana ny tetikasa dia manana fitaovana kely izahay, google drive sns. Ireo fitaovana rehetra ireo dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny tontolon'ny varotra nomerika.